20 kamid ah haweenka ku jira Xildhibaanada Labada Aqal oo u dhoofay dalka Turkiga – Somali Top News
20 kamid ah haweenka ku jira Xildhibaanada Labada Aqal oo u dhoofay dalka Turkiga
February 25, 2019 Somali Top News	0 Comments
Haweenka ku jira Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta safar ku saleysan aqoon isweydaarsi ugu ambabaxay dalka Turkiga.
Haweenka Xildhibaanada ee u ambabaxay dalka Turkiga ayaa ka kooban 20-Xildhibaan,waxaana sidoo kale qeyb ka ah safarka Dahabo Xasan Axmed oo ka socota Hay’adda Hear Women oo fidisay kulanka aqoon kororsiga ee ka dhacaya dalka Turkiga.
Xildhibaan Dr. Mina Xasan Maxamed oo ka tirsan Golaha shacabka Baarlamaanka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadashay gudaha Garoonka Aadan Cadde ka hor inteysan dhoofin ayaa sheegtay in tababar soconaya mudo todobaad ah ugu ambabaxeen dalka Turkiga,waxayna rajo wanaagsan ka muujisay in wax badan oo qibrad ah ka soo faa’idi doonaan howsha ay u baxeen.
Waxay sheegtay in tababarka ay u socdaan dan weyn ugu jirto,islamarkaana rajeyneyso iney aqoon wanaagsan kala soo laabtaan Turkiga.
Senator Saciido Xasan Cusmaan oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Hay’adda Hear Women uga mahad celisay casuumaddan aqoon isweydaarsiga oo ay u fidisay,waxayna tilmaantay iney wax badan ka soo faa’ideysan doonaan mudada ay joogaan dalka Turkiga.
Ugu dambeyntii,mudada Xildhibaanada Haweenka Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ay ku sugan yihiin dalka Turkiga waxay la kulmi doonaan Haweenka ku jira Baarlamaanka dalkaasi oo ay ka wada arrinsan doonaan sidii xiriir wanaagsan u yeelan lahaayeen Labada Baarlamaan gaar ahaan Haweenkooda.
← Al shabaab oo dad shacab ah ku laayay gobalka Shabeelaha Hoose
Qatar and Somalia review bilateral relations →
Madaxweyne Farmaajo oo dhambaal hambalyo ah u diray Barham Salih
October 3, 2018 Somali Top News 0
Diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeyn khasaaro geystay ka fuliyay dagmada Saakoow
September 19, 2018 Somali Top News 0
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay in Norway ay shidaal ka baareyso Soomaaliya
September 9, 2018 Somali Top News 0